ချစ်သူများနေ့မှာ ဒိတ်မယ့်သူကို အလင်းပြလိုက်တဲ့ ဆောင်းဝတ်ရည်မေ – Askstyle
ချစ်သူများနေ့မှာ ဒိတ်မယ့်သူကို အလင်းပြလိုက်တဲ့ ဆောင်းဝတ်ရည်မေ
CeleConnections ပရိသတ္ႀကီးေရ ေဆာင္းဝတ္ရည္ေမကေတာ့ ဇာတ္လမ္းတြဲေတြကေန ပရိသတ္ေတြ သတိထားမိလာတဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲမင္းသမီးေလးတစ္လက္ပါပဲေနာ္။ သူမရဲ႕ ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့ စကားသံဝဲဝဲေလးက ေယာက်ာ္းေလးပရိသတ္ေတြ ေႂကြေနရတဲ့ အခ်က္ထဲကတစ္ခ်က္ပါ။ သူမရဲ႕ ပရိသတ္ေတြက ခ်စ္စႏိုးနဲ႔ တုတုေလးလို႔ လည္း ေခၚေလ့ရွိၾကပါတယ္။
တုတုေလးကေတာ့ ဇာတ္လမ္းတြဲေတ စတင္႐ိုက္ကူးကတည္းက သူမရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ပရိသတ္ရင္ထဲကို ေရာက္ရရွိၿပီးသားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာဆိုရင္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေတြမွာလည္း ဝါရင့္သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြနဲ႔ တြဲဖက္ကာ ႐ိုက္ကူးေနသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာင္းဝတ္ရည္ေမေလးကေတာ့ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚေလွ်ာက္လွမ္းေနၿပီလို႔ ဆိုရမွာပါ။
သူမရဲ႕ အခ်စ္ေရးကေတာ့ အခုခ်ိန္ထိ Single အျဖစ္နဲ႔ ပရိသတ္ေတြကိုပဲ အျပည့္အဝခ်စ္ေပးေနသူေလးျဖစ္ၿပီး သူမရဲ႕ အခ်စ္ေရးကို ကိုရီးယားႏိုင္ငံက မင္းသားေတြနဲ႔ ဆိုကာ အၿမဲစေနာက္အ႐ႊန္းေဖာက္တတ္သူေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာမွာ ေရာက္ရွိလာေတာ့မယ့္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာ တုတုေလးကေတာ့
“ က်ဳပ္ ညည္းတို႔ကို Reply ျပန္ရင္း ခြီဖို႔မအားေသးဘူး…. Feb(14) မွာ Arjushi နဲ႔ Dateလုပ္ရင္ လွေနေအာင္ စကြင္းကဲေနတယ္… ညည္းေလးတို႔ပဲ FA လုပ္.. ကြၽန္မ မလုပ္ဘူး.. ” ဆိုတဲ့ စာေလးနဲ႔ သူမရဲ႕ပရိသတ္ေတြကို အ႐ႊန္းေဖာက္စေနာက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြကလည္း တကယ္ Faဘဝကို စြန႔္လႊတ္ေတာ့မွာလားတဲ့ ဆိုတဲ့ စေနာက္တဲ့မွတ္ခ်က္ေလးေတြျပန္ေပးခဲ့တာပါ။ခ်စ္စရာေကာင္းလွတဲ့ပရိသတ္ေတြနဲ႔အတူအျပန္အလွန္ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရးထားရွိထားတဲ့ တုတုေလးကို ခ်စ္ရင္ မွတ္ခ်က္တစ္ခုခုေပးခဲ့ပါဦးCeleConnections ပရိသတ္ႀကီးေရ……။
CeleConnections ပရိသတ်ကြီးရေ ဆောင်းဝတ်ရည်မေကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကနေ ပရိသတ်တွေ သတိထားမိလာတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲမင်းသမီးလေးတစ်လက်ပါပဲနော်။ သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ စကားသံဝဲဝဲလေးက ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေ ကြွေနေရတဲ့ အချက်ထဲကတစ်ချက်ပါ။ သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုးနဲ့ တုတုလေးလို့ လည်း ခေါ်လေ့ရှိကြပါတယ်။
တုတုလေးကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတေ စတင်ရိုက်ကူးကတည်းက သူမရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေက ပရိသတ်ရင်ထဲကို ရောက်ရရှိပြီးသားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာလည်း ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ တွဲဖက်ကာ ရိုက်ကူးနေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းဝတ်ရည်မေလေးကတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်လျှောက်လှမ်းနေပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။
သူမရဲ့ အချစ်ရေးကတော့ အခုချိန်ထိ Single အဖြစ်နဲ့ ပရိသတ်တွေကိုပဲ အပြည့်အဝချစ်ပေးနေသူလေးဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ အချစ်ရေးကို ကိုရီးယားနိုင်ငံက မင်းသားတွေနဲ့ ဆိုကာ အမြဲစနောက်အရွှန်းဖောက်တတ်သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာ ရောက်ရှိလာတော့မယ့် ချစ်သူများနေ့မှာ တုတုလေးကတော့
“ ကျုပ် ညည်းတို့ကို Reply ပြန်ရင်း ခွီဖို့မအားသေးဘူး…. Feb(14) မှာ Arjushi နဲ့ Dateလုပ်ရင် လှနေအောင် စကွင်းကဲနေတယ်… ညည်းလေးတို့ပဲ FA လုပ်.. ကျွန်မ မလုပ်ဘူး.. ” ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ သူမရဲ့ပရိသတ်တွေကို အရွှန်းဖောက်စနောက်ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကလည်း တကယ် Faဘဝကို စွန့်လွှတ်တော့မှာလားတဲ့ ဆိုတဲ့ စနောက်တဲ့မှတ်ချက်လေးတွေပြန်ပေးခဲ့တာပါ။ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အတူအပြန်အလှန်ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးထားရှိထားတဲ့ တုတုလေးကို ချစ်ရင် မှတ်ချက်တစ်ခုခုပေးခဲ့ပါဦးCeleConnections ပရိသတ်ကြီးရေ……။